I-XZ1000A yecala elirhangqwayo lokomba ulwelo lokurhola linobubanzi obuphindaphindeneyo bokuguqula i-1200mm, amandla amakhulu okutsala amandla we-1075kN, itorque ye-45000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-23t.
I-XZ1000A HDD luyilo oluzimeleyo lokuzilayisha ngokwalo, olusebenzisa ubuchwephesha obuninzi bolawulo oluphambili, njengokuvalwa kwesekethe yokugcina amandla, ulawulo lwe-electro-hydrocortugal, ukulawula umthwalo onobuthathaka kunye nobuchwephesha benkampani yethu. Iiparameter eziphambili zendlela yokusebenza kunye netekhnoloji yolawulo ifikelele kwinqanaba eliphambili lehlabathi. Inkqubo yeHydraulic kunye nezinye izinto eziphambili zikhethiweyo iimveliso zebranti eyaziwayo yamanye amazwe, ukuthembeka okuphezulu.
Iimpawu Ukungeniswa kweXZ1000A HDD
1. Gear yokubeka push-utsalo, oluzinzileyo noluthembekileyo transmission, amandla intloko edibanise edada ephakamisa drill umbhobho ubomi inkonzo inkonzo;
2. PE ubuchwephesha bokukhululwa kwemali eseleyo yombhobho, ukuthintela ngokufanelekileyo umonakalo wezixhobo obangelwe ngamandla okusabela kumbhobho wokurhola umva, kunye nokuphucula ukuthembeka kolwakhiwo lwezixhobo;
3. Inkqubo yolawulo lwendlela yokuhamba ngokulinganayo ukuqinisekisa ukhuseleko lokuhamba;
4.Ukuhamba kodaka okunamanqanaba amaninzi kwinkqubo yokulawula isantya, gcina udaka, ukunciphisa ungcoliseko;
5. Cab unokufikelela 45 ° ujikelezo, ukuphucula intuthuzelo yokusebenza.
264 / 2100 kW / r / min
11500 × 2900 × 3000
Inkampani yeChongqing Cummins yeNjini
I-American SAUER (ingenisa ngaphakathi (i-US)
I-France POCLAIN (ukungenisa ngaphakathi)
I-Itali Heli (Ngenisa ngaphakathi)
Oomatshini bokwakha baseShanpui
Korea Dongming (Ngenisa ngaphakathi)
IWestford (ukungenisa elizweni)
XZ1000A HDD ukuqala komatshini xa uhamba noluhlu lokupakisha, kubandakanya
ukulandela amaxwebhu obuchwephesha: / Isatifikethi seMveliso / Imanyuwali yeMveliso / Ukucaciswa kweNjini / Isimo soMoya seNcwadi yesiThuthi
UkuSebenza kunye nokuGcinwa kweNcwadi yesiKhokelo seLader / yeNcwadi yokuFundisa iMpompo
Egqithileyo XZ680A tyaba zemiyalelo yokomba rig
Okulandelayo: I-XZ1350 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo
Umngxunya wokungxola iBorehole
XZ680A tyaba zemiyalelo yokomba rig
I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd, Umatshini wokugrumba amaqula, Horizontal Directional Ukubhola Rig,